Soo-saaraha Hydraulics Drive, Alaab-qeybiye, Warshad - yareeyayaal, dixirayaasha dixiriga, sanduuqyada gear-ka dixiriga ah, sanduuqa meerayaasha meerayaasha, xawaare yareeyayaasha, kala-duwanayaasha, qalabka kala duwan, qalabka geesaha lagu buuxiyo ee loo yaqaan 'sprial bevel gear, gearboxes-yada beeraha, cagafyada gawaarida, qalabka gawaarida xamuulka', geerka dixiriga ah
0086-571-88220971 [email protected]ducers.com
Hadday alaabtaadu guureyso, rogayso, sameysmeyso, wax sameysmeyso, wax qaadid, qodid ama rarid, waxaad ku kalsoonaan kartaa alaabada hzpt-ka ee hzpt si aad u siiso waxqabadka loo baahan yahay si tartan loogu sii jiro. hzpt wuxuu si aan macquul ahayn ugu heellan yahay hoggaankiisa codsiyada moobiilka iyo warshadaha, isagoo hzpt ka dhigaya mid ka mid ah kuwa ugu doorbida alaab-qeybiyeyaasha nidaamyada hidda, qaybaha, kontaroolada iyo xalalka injineernimada adduunka oo dhan.
matoorrada hzpt, matoorrada, idaacadaha, filtarka, silsiladaha, kontaroolayaasha, tuubbooyinka iyo qalabyada ayaa bixiya iskudhaf gaar ah oo tikniyoolajiyad lagu kalsoonaan karo iyo naqshad casri ah, taas oo si toos ah loogu turjumi karo waxqabad la isku halleyn karo iyo waqti dheeri. Haddii aad ubaahantahay hal qayb, xalka qaabeynta loogu talagalay, ama qayb kasta oo udhaxeysa, hzpt waa lammaanaha xulashada ee barnaamijyada moobiilka iyo warshadaha oo kaliya ubaahan inay si sax ah u shaqeeyaan.
HYDRAULICS Drive - WINCHES HGJ2.54-100-46-17.5-ZPL
HYDRAULICS Drive - WINCHES HGJ45-150-20-24-ZP
HYDRAULICS Drive - WINCHES HNYJ2.53-30-150-12-ZP
HYDRAULICS Drive - WINCHES HLYJ6-160-135-26-ZP
FARSAMADDA HAWLGALKA- WINCHES IDJ23-10-30-14
HYDRAULICS Drive - WINCHES HYJ3-21-300-18-ZP
HYDRAULICS Drive - WINCHES HYJ3A-27.5-49-16-ZP
HYDRAULICS Drive - WINCHES HYJ3-40-49-18-ZP
HYDRAULICS Drive - WINCHES HYJ67-300-50-36-ZP
A nidaamka drive Haydarooliga waa wadis ama gudbinta nidaamka isticmaala cadaadiska dareeraha dareeraha in la wado mashiinada Haydarooliga. Ereyga hydrostatic waxaa loola jeedaa kala wareejinta tamarta qulqulka iyo cadaadiska, maahan kan tamar kuleylka socodka.
Nidaamka wadista korantada wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood: koronto dhaliyaha (tusaale ahaan a bamka Haydarooliga), waxaa waday an matoor koronto, gubasho engine ama a dabayl; filtarka, miirayaasha, dhuumaha iwm (si loo hago loona xakameeyo nidaamka); mootada (tusaale a matoorka dareeraha or dhululubada) si loo kaxeeyo makiinadaha.
Mabda'a wadista haydarooligaedit
Sharciga Pascal waa aasaaska nidaamyada hawo-qaadashada. Maaddaama cadaadiska nidaamka uu yahay mid isku mid ah, xoogga uu dareeraha siinayo hareeraha ayaa sidaas darteed la mid ah aagga pressure cadaadiska. Sidan oo kale, Bistoolad yar waxay dareemeysaa xoog yar iyo bistoolad weyn waxay dareemeysaa xoog badan.
Mabda 'isku mid ah ayaa lagu dabaqayaa mashiinka hawo-qaadashada oo leh mug yar oo xaaq ah oo weyddiisanaya in yar Xuddunta, oo ay weheliso matoor Haydarooliga oo wata mug ballaaran oo xaaq ah oo siinaya awood ballaaran. Sidan oo kale waxaa lagu dhisi karaa gudbinta leh saami cayiman.
Nidaamyada badankood ee korontada ku shaqeeya waxay isticmaalaan dhululubbada. Halkan isla mabda'a ayaa loo isticmaalaa - miisaanka yar waxaa lagu gudbin karaa xoog weyn.
Adoo tuuraya dheecaanka u dhexeeya qaybta koronto-dhaliye iyo qaybta mootada, ama adoo isticmaalaya bambooyin haydarool iyo / ama matoorro leh mug xaaqan oo la hagaajin karo, saamiga gudbinta si fudud ayaa loo beddeli karaa. Haddii ay dhacdo in xiiq la isticmaalo, waxtarka gudbinta wuu xadidan yahay. Haddii ay dhacdo in bambooyin iyo matoorrada la hagaajin karo la isticmaalo, waxtarka, si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u ballaaran. Xaqiiqdii, illaa illaa 1980, nidaamka wadista hawo-haweedku waa ku adag tahay wax tartan ah oo ka yimaada nidaamyada kale ee lagu hagaajin karo.
Maalmahan, nidaamyada wadista korantada iyadoo la adeegsanayo mishiinnada korantada korontada ku shaqeeya waxaa lagu xakamayn karaa hab aad u wanaagsan oo si fudud ayey ula tartami karaan nidaamyada wadista korantada wareegaya. Tilmaamayaasha Haydarooliga ayaa, dhab ahaantii, iyadoon loo tartamin xoogagga toosan. Wixii dhululubadayaashan ah, nidaamyada Haydarooliga ayaa sii ahaan doona kuwo xiise leh oo haddii nidaam noocan oo kale ah la heli karo, way fududahay waana macquul in loo adeegsado nidaamkan wadayaasha wareega ee nidaamyada qaboojinta, sidoo kale.
Dhululubo haydiyaal leh (sidoo kale loo yaqaan 'matoorrada korantada toosan) waa farsamo jilaayaasha kuwaas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo xoog toosan iyada oo loo marayo istaroogga toosan. Taangiyadaha Haydarooliga waxay awood u leeyihiin inay bixiyaan xoogagga riixaya iyo kuwa jiidaya ee malaayiin metrik ton oo leh kaliya hawo-fudud oo fudud Mashiinno sireed aad u fudud ayaa loo adeegsadaa saxaafadda; halkan, dhululubadu waxay ka kooban tahay mug bir bir ah oo leh tuubbo la riixay oo lagu daboolay dabool. Adoo ku shubaya dareeraha Haydarooliga mugga, tuubbada waxaa lagu riixayaa xoog leh cadaadis-aagga aagga.
Dhululubbooyin casri ah oo dheeri ah ayaa leh jir dabool leh dhamaadka, a bistoolad, Oo ah madaxa silsiladda. Dhinac dhinac hoose waa, tusaale ahaan, ku xiran hal xariif, Halka dhinaca kale, usha bistooladdu sidoo kale lagu saadaalinayo hal kiliif. Qolofta silsiladdu waxay caadi ahaan leedahay xiriirro haydarool labada dhinacba; taasi waa, iskuxirid dhanka hoose ah iyo iskuxirid dhinaca madaxa silsiladda. Haddii saliidda waxaa lagu riixaa bistoolada hoosteeda, usha bistoolada waa la riixaa saliiduna waxay ahayd inta udhaxeysa bistoolada iyo madaxa silsiladda dib ayaa loogu riixaa haanta saliida
Jaantuska wareegga aasaasiga ah loop furan iyo loop xiran nidaamka.
Matoor Haydarooliga waa dhiggiisa Rotary ee dhululubo Haydarooliga. Fikrad ahaan, matoor Haydarooliga waa inuu ahaadaa mid lagu beddeli karo kan bamka Haydarooliga, xaqiiqda awgeed waxay qabataa shaqada ka soo horjeedda. Si kastaba ha noqotee, inta badan bambooyin haydarool ah looma isticmaali karo matoorro haydarool maxaa yeelay dib looma soo celin karo. Sidoo kale, matoor hawo-dhaqameed waxaa badanaa loogu talagalay cadaadiska shaqada ee labada dhinac ee matoorka. Farqiga kale ayaa ah in mootada lagu rogi karo waalka gadaal loo rogo.
Cadaadiska nidaamka Haydarooliga wuxuu la mid yahay danabka ku jira nidaamka korantada iyo qulqulka socodka dareeraha ayaa u dhigma kan hadda jira. Baaxadda iyo xawaaraha bamka ayaa go'aaminaya heerka socodka, culeyska mootada ayaa go'aaminaya cadaadiska.